khaing po po win's Page - Myanmar in Singapore
khaing po po win
Share Blog Posts (6)Discussions (19)Events in SingaporeGroupsPhotos (21)Photo Albums khaing po po win's Likes Khaing po po win's Friends
khaing po po win has not received any gifts yet
khaing po po win's Page
Roll One commented on khaing po po win's blog post ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်...."အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့
ဂါရ၀ ပြုပါရစေဗျာ.."Feb 21, 2014manakui commented on khaing po po win's blog post ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်...."13+1+1991+4+4+1990=4181 4+1+8+1=14 > 1+4=5 အဖြေက5ပေါ့ ရှင်းပြီနော် ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဲလိုရလာတာလဲမသိဘူး တို့သိချင်တယ်တတ်ချင်တယ်
တို့ဝါသနာပါလို့ပါ စိတ်လည်းဝင်စားတယ်အဲတာကြောင့်တို့ဖန်လိုကရအောင်…"Jul 27, 2013Thu Rein liked khaing po po win's blog post ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်....Feb 8, 2013nainglinn commented on khaing po po win's blog post ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်...."thank"May 28, 2012paingsittlin commented on khaing po po win's blog post ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်...."correct pa byar
"May 27, 2012KATHY TUN commented on khaing po po win's blog post ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်...."correct
"May 13, 2012Eaint Phoo Wai commented on khaing po po win's blog post ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်...."သူငယ်ချင်းတို့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်လဲ သူငယ်ချင်းပေးတဲ့ဟာကို share လုပ်ပေးလိုက်တာ ကျန်တာတော့ အတိဝူး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ မှန်တယ်လို့ခံစား၇တယ် ဟီးးးးးတိုက်ဆိုင်၇င်မှန်တယ်လို့မှတ်ယူပြီး မတိုက်ဆိုင်ခဲ့၇င်တော့ မမှန်ဝူးလို့ပဲ ခံယူပါနော်…"May 10, 2012kaungmyatkyaw commented on khaing po po win's blog post ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်...."မှန်တယ်ဗျို့ ကျွန်တော်က ၃ ၊ ကျွန်တော်ကသာ ............. ဟီဟီး"May 2, 2012ZAR ZAR LATT liked khaing po po win's blog post ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်....Feb 25, 2012Myo Than Htike liked khaing po po win's blog post ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်....Feb 6, 2012linsatnay and khaing po po win are now friendsJan 11, 2012nant ladyia cho commented on khaing po po win's blog post ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်...."ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"Dec 26, 2011ACRS Autoinsurance commented on khaing po po win's blog post ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်...."13+1+1991+4+4+1990= 4003 =7(ဘယ်လိုတွက်လိုက်လို့ 4181 ရသွားတာလဲ)
"Dec 21, 2011ဖြိုးလေး commented on khaing po po win's blog post ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်...."နံပါတ်၇ ရတယ်. မှားနေတယ်. သူကတစ်ကိုယ်ကောင်းမဆံသလို ပွေမပွေတော့မသိဘူး ကပ်စေးလည်းမနည်းတာတော့ သေချာတယ်. နောက်ပြီး သူ့ကူညီတယ်ဆိုတာကို မသိစေချင်တဲ့ လူစားမျိုးပါ..ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော့ အထင်ကြီးတတ်တယ်.... ဒါလေးတစ်ခုပဲ မှန်တယ်...
"Dec 16, 2011hnin oo wai commented on khaing po po win's blog post ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်...."နောက်ဆုံးတော့လည်း ဘယ်လူမှ သင့်ရဲ့အခုအရသာမရှိတဲ့ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်လူထက်ပိုပြီး ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်သိလိမ့်မယ် ...မသိနိုင်ဘူးလေ အဲဒီအချိန်ရောက်ခဲ့ရင် ...နှောင်းချင်လည်းနှောင်းသွားမှာပေါ့…"Oct 12, 2011khaing po po win replied to po po lay's discussion singapore အလုပ်ခွင်မှာ မြန်မာအချင်းချင်း အကျင့် မကောင်းမှု များ"Yes..completely correct! အသစ်ဝင်လာသူက သူတို့ထက်ကျော်သွားမလားဆိုပြိး Jealous ဖြစ်တက်တဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့စိတ်ထားပိုင်ရှင်တွေအဲဒိအတိုင်းပဲ...ကိုယ်တွေ့ကိုယ်တွေ့..တခုအကြံပေးချင်တာက…"Oct 9, 2011 More... RSS
reading, learning, drawing with AUTO CAD
khaing po po win's Photos
Khaing po po win's Blog
"လျှို့ဝှက်ချက်" ...............forward mail ကရလို့ share လုပ်လိုက်တာပါ........................
Posted on May 14, 2011 at 9:50am6Comments
ါတုန်းကပေါ့ မျှော်စင်အိုကြီးတစ်ခုအနားမှာ ဖားကလေးတွေဟာ စုပေါင်းပြီး ပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေထိုင်ကြသတဲ့။ တစ်နေ့မှာဖားတစ်ကောင်က မြင့်မားတဲ့မျှော်စင်အိုကြီး ကိုကြည့်ပြီး စိတ်ကူးတစ်ခုရလာပါတယ်။ အဲဒီနောက် “အဆွေဖားတို့ ကျွန်တော်တို့ အခုလိုအိပ်လိုက်စားလိုက် နေမယ့်အစား ဘယ်ဖားက အစွမ်းအစအရှိဆုံးလဲသိရအောင်ပြို
င်ပွဲတစ်ခုလုပ်ကြရအောင်” လို့အကြံပြုတော့ အစွမ်းပြလိုတဲ့ အခြားဖားတွေကပြိုင်ကြရအောင်ဆိုပြီးထောက်ခံကြတာပေါ့။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို စတင်ကြပါတယ်။… Continue ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်....
Posted on April 29, 2011 at 9:35am 13 Comments
ရယ် သင့်ရဲ့ချစ်သူေ မွးနေ့သက္ကရာဇ်အားလုံးကိုပေါင်ြး ကည့် နောက်ဆုံးရလာတဲ့ကိန်းတစ်လုံးက အဖြေပေါ့... ကဲ အစမ်းလေးလုပ်ကြည့်ရအောင် သင်က 13.1.1991 သင့်ချစ်သူက 4.4.1990 ဆိုပါစို့ 13+1+1991+4+4+1990=4181 4+1+8+1=14 > 1+4=5 အဖြေက5ပေါ့ ရှင်းပြီနော်... ကဲ တွက်ကြည့်ကြနော်.. သူငယ်ချင်းတို့လဲစမ်းကြည့်လိုက် ကြနော်............ (1… Continue ကိုးဆယ်ကိုးအသင်းဝင် (99 Club)
Posted on April 16, 2011 at 9:30am0Comments
တခါတုံးက အလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာပြည့်စုံစွာ နေနေရပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ ရောင့်ရဲခြင်းမရှိတဲ့ ဘုရင်တပါးရှိတယ်။
တနေ့တော့ သူဟာ သူ့နန်းတော်အတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုနေတုံး သီချင်းလေးတအေးအေးနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူ့ရဲ့အမှုထမ်းတစ်ယောက်ကို သွားတွေ့တော့ အဲ့ဒီမြင်ကွင်းက သူ့ကို အလွန်စိတ်ဝင်စားစေတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ သူလဲ အဲ့ဒီသူအနားကို သွားပြီး “ဘာလို့ အဲ့လောက်တောင်များ စိတ်အေးလက်အေး ပျော်ရွှင်နေနိုင်သလဲ” လို့ မေးသတဲ့ ။
အဲ့ဒီတော့ အမှုထမ်းက “အရှင် ..… Continue ..(ဖတ်သင့်တဲ့ ဥပမာလေးပါ) ပြန်ပြိး share လုပ်လိုက်ပါတယ်
Posted on April 14, 2011 at 10:00am 14 Comments
" လွတ်ချထားလိုက်ပါ" တနေ့မှာ ဆရာက ဖန်ခွက်တစ်လုံးကို လက်မှာကိုင်ထားပြီး 'ဒီဖန်ခွက်က ဘယ်လောက်လေးမယ်ထင်သလဲ' လို့ ကျောင်းသားတွေကို မေးတယ်.. ၅၀ဂရမ်၊ ၁၀၀ ဂရမ်အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုးအဖြေတွေကို သူရတယ် .. ဆရာက ဆက်ပြောတယ် .. 'ဒီဖန်ခွက်ရဲ့ တကယ့် အလေးခ်ျိန်ကိုတော့ ဆရာမသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆရာမေးချင်တာ ဒီဖန်ခွက်ကို ဒီအတိုင်းပဲ ဆရာ ခဏလောက် ကိုင်ထားရင်ဘာဖြစ်မလဲ ဆိုတာပဲ ..' "ဘာမှမဖြစ်ဘူး" လို့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ကဖြေတော့… Continue AddaBlog Post
At 10:47am on April 15, 2011, လွမ်းမေဦး said… ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်လေးပါ
ပြန်အုန်းမယ်နော် At 9:47am on April 15, 2011, နိုဝင်ဘာမိုး said… အဟင့် အင်္ဂလိပ်လိုမသိပါဘူးဆိုမှ....လည်၇ာပြန်စားေ၇းကို...အင်္ဂလိပ်ပြန်ခိုင်း၇က်တယ်နော်... At 10:26am on April 7, 2011, phoekhwar said… more good to see with long hair. At 10:21am on April 7, 2011, phoekhwar said…aku mar tae tae char char see phyt tar At 10:18am on April 7, 2011, phoekhwar said… now At 10:14am on April 7, 2011, phoekhwar said… do u know me.
guess who! At 11:00pm on March 22, 2011, minkoko said… if u want to practise english grammar,www.examenglish.com..www.english-test.net
my gmail account is moekaungkin2028@gmail.com At 3:54pm on July 26, 2010, htin kyaw said… ဟဟဟ တော်သေးတာပေါ့ just kidding မို့လို့လေ.... ရင်တွေဘာတွေတောင်တုန်သွားတယ်....ဟီဟိ At 3:36pm on June 13, 2010, Ha Ha said… လည်လာတယ်နော်
Water Effect by Crazyprofile.com At 9:03pm on June 8, 2010, တိတိ said… ဘလော့ရေးသူက ငါဟုတ်ပါဘူးဟ... ငါက ကော်ကော်လုပ်လာဒါ... အေးဟ... နင်ပြောမှသတိရတဲ့ စင်္ကာပူရောက်ပေမဲ့ အသားက ပိုမဲသွားသဟ... ဒါတောင် ငါ့မှာ နေကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရတာ လနဲ့ချီနေပြီ... ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိပါဘူးဟာ... ဗီဇနဲ့တူပါရဲ့.... No comments yet!